Mbipụta ihuenyo / bipụta ya na uwe printing Akwụkwọ mbipụta ọkachamara na uwe
Eserese ihuenyo bụ otu n'ime usoro akara akara kachasị ewu ewu na-ahọrọkarị mgbasa ozi t-uwe, uwe elu nwanyị ma ọ bụ ụfọdụ Ngwa mgbasa ozi dịka akpa ma ọ bụ na okpu. Typedị mbipụta a na-arụ ọrụ kachasị mma maka ihu buru ibu na nke dị larịị yana akwa akwa, n'adịghị ka ihe mkpuchi kọmputanke a na-akwadoro maka obere eserese na ihe ndị dị ntakịrị ma sie ike.
Mbipụta ihuenyo - ezigbo maka nnukwu eserese na mbara ala
Ihe eserese, logos ma ọ bụ ihe ederede e mere na mbipụta ihuenyo dị elu ga-eguzogide ọ bụghị naanị iji, kamakwa ịsacha na nnukwu okpomọkụ. Ọ bụ usoro dị oke ọnụ ahịa iji kaa akara n'ihe metụtara ogo ya. Maka mbipụta ihuenyo, a na-eji ihuenyo, ebe agba na-agbasa na ntupu dum na agụba dọkịta. Agba nke kụrụ na akwa ahụ na-adịgide adịgide n'ime ya.
Ndị otu anyị na-enye akara ngosi ọ bụla ahọrọ ma ọ bụ ihe ederede site na mbipụta ihuenyo.
Matrix maka ebi akwụkwọ na ihuenyo
A dịgasị iche iche nke ihuenyo ebi akwụkwọ na agba
Isi uru nke mbipụta ihuenyo bụ ikike ịmepụta eserese na agba ọ bụla. Mgbe ị na-eme mbipụta na uwe, ihe eserese na w agba agba ma na-egosipụta oke.
Uru ọzọ bụ nhọrọ nke shading. Enwere ike ịgwakọta agba ya na ibe ya. Kọmputa mmemme raara nye agba inggwakọta usoro n'ụzọ ziri ezi gbakọọ grammage nke chọrọ ink iji mee ka kacha kpọmkwem agba na a ga-etinyere na ngwaahịa.
Mbipụta ihuenyo na-eguzogide ọgwụ ịsacha, enwere ike ịsacha ya na igwe ịsa akpaka na nhọrọ ntụgharị. Ọnọdụ bụ mbipụta kwesịrị ekwesị yana usoro mmepụta niile na agba dị elu.
T-Shirt na eserese eserese eserese
Ọnụahịa nke mbipụta ihuenyo na-adabere na mgbasa
Ọnụahịa nke mbipụta ihuenyo dabere na mbọ ahụ. Ọ bụ ya mere o ji dị mma ịhọrọ ya maka nnukwu iwu. Nkwadebe nke matrik ahụ bụ ego akwụ ụgwọ, na-anọghị na mbọ ahụ.
Ọzọkwa, ọ bụrụ na anyị chọrọ ịme mpempe akwụkwọ nke T-shirt ma ọ bụ akpa ihe atụ, anyị kwesịrị iburu n'uche ọnụ ahịa ya nkwadebe matriks. Na usoro obibi akwụkwọ a, a na-etinye agba ọ bụla iche iche, site na ihuenyo dị iche.
Ọ na-abịa site na nkwadebe matriks dị iche maka agba ọ bụla. Agbanyeghị, ọ baghị oke na itinye nnukwu mbọ. Ọ na-arụ ọrụ nke ọma na nnukwu iwu maka ihe omume egwuregwu, onyinye maka asọmpi ma ọ bụ ọtụtụ ndị ọrụ.
Ngosipụta nke mbipụta ihuenyo
Ihuenyo nyocha sitere na otutu uzo ya, o nwere ike iji ya mee ihe eji aka ogho na ihe plastik, na obuna osisi. A na-ahọrọ akwụkwọ ngebichi maka uwe na textiles mgbasa ozi. Mbipụta ahụ na-eguzogide ọgwụ mmebi igwe, ìhè anyanwụ na mmiri.
Anyị na-akpọ gị òkù ịkwado anyị mbinye aka nwere ọtụtụ afọ ahụmahụ na-akanye mgbasa ozi na uwe ọrụ. Anyị nwere ọtụtụ nhọrọ nke ngwaahịa, ndị otu anyị ga-enwe obi ụtọ inyere gị aka ịhọrọ na otu esi ebipụta.
Akara T-shirtsT-uwe elu na-ebipụtana-ebi akwụkwọ na T-shirtsbipụta na uweuwe akaraUwe nwere logouwe na nbipute ihuenyouwe akaraPolos nwere ahaIhu akwụkwọnnyefe thermouwe nwere mbipụta
Nwee onyinye a